Nepal : Mpanao Gazety Voasambotra Fa Namoaka An-Gazety Ny Fiainana “Firaisana Ara-nofo” Tao Aminà Sekoly Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2013 3:58 GMT
Sary avy amin'i Esteban Cavrico. (CC BY-NC-ND 2.0)
Mpanao gazety Nepale telo no voaheloka ho namoaka vaovao mahatezitra sy manala baràka tamin'ny aterineto ary nosamborina tamin'ny herinandro teo. Nentin'ny mpitandro filaminana notànana vonjimaika ry zareo taorian'ny fametrahana fitarainana nataon'ireo manampahefana avy ao amin'ny Padma Kanya Multiple College, Oniversitem-panjakana, momba ilay lahatsoratra tao amin'ny tranonkalam-baovao nepaliheadlines.com izay nitsikeran'izy ireo ny fiainana momba ny firaisana ara-nofon'ny mpianatra ao amin'io kolejy io. Notaterin'ny Groundviews fa tantarain'io vaovao io ny fampiasan'ireo mpianatra zazavavy baranjely ho solonà filahiana.
Notànana vonjimaika nandritra ny fito andro tany amin'ny Polisy Monisipalin'i Kathmandu ireo mpanao gazety voasambotra , i Sushil Panta, tonian-dahatsoratry ny nepaliheadlines.com, sy i Puskar Bhattarai ary i Santosh Bhattaraiand mpanao gazety mpanangom-baovao. Voalaza fa navotsotra izy ireo ny 24 Jona.
Nambaran'ny mpitandro ny filaminana fa azo enjehana araka ny lalàna mifehy ny Lalàna mifehy ny Fifanakalozana Elektrônika (2008) sy ny lalàna mifehy ny heloka bevava atao amin'ny ‘cyber’ eo amin'ny firenena ireo mpanao gazety. Izao no ambaran'i Shreedeep Rayamajhi :
Araka ny lalàna mifehy ny Fifanakalozana Elektrônika Nepale (2008), ny olona izay nahavita heloka bevava atao amin'ny ‘cyber’ dia voaheloka handoa onitra hatramin'ny 100,00 Rs na migadra mandritra ny dimy taona fara-fahaelany na izy roa miaraka.
Nampian'ilay mpitoraka bilaogy hoe :
[Nifanaraka] taminà teboka dimy ny Filankevitry ny Mpanao gazety any Nepal (PCN), ny Federasiônan'ny Mpanao Gazety Nepale (FNJ) ary ny Dllibazaar Kanya Campus tamin'ny Alahady mba hamotsorana ireo mpanao gazety amin'ny aterineto, ao anatin'izany ny fandraisana fepetra avy hatrany momba ireo voaheloka aorian'ny fanadihadiana sy ny fisintonan'ny Campus ny fitoriana azy ireo.
Nitaky ny hamotsorana avy hatrany ireo mpanao gazety nosamborina ny The World Association of Press Councils (WAPC), amin'ny filazana fa fanehoana ny fanitsakitsahana ny lalàna izao fisamborana izao ary nanamafy ihany koa fa manana lalàna hafa ankoatra ny fanagadràna ny haino aman-jery Nepale amin'ny tranga tahaka izao. Nanameloka ny fisamborana ireo mpanao gazety ireo ny Federasiônan'ny mpanao gazety Nepale (FNJ).
Nanamafy ny Filan-kevitry ny gazety Nepale, ny governemanta izay voatendry ho tompon'andraikitry ny fampiharana ny politikan'ny haino aman-jery eo amin'ny firenena fa raha nandika ny lalàm-pitondran-tenan'ny Filankevitra ny mpanao gazety dia ny Filankevitra- fa tsy ny mpitandro ny filaminana- no handray ny fepetra amin’ ireo voaheloka. Navoakany tamin'ny gazety fa :
Tsy ara-drariny mihitsy ny fisamborana mpanao gazety momba ny resa-baovao… raha efa ankinina amin'ny Filankevitry ny gazety an-tsoratra sy ny haino aman-jery elektronika ny asa fanarahamaso ny media an-tsoratra sy atonta printy.
Aminà famoahan-dahatsoratra mifandraika amin'izy ity dia eritreretin'ny Filankevitra ny hampidirana ho eo ambanin'ny fitàzonany vonjimaika ireo tranonkalam-baovao. Amin'izao fotoana dia ireo haino aman-jery tranainy ( tsy dizitaly) ihany no arahan'ny Filankevitra maso.